Qofkii ka dambeeyay dilkii Sheekh Cali Dheere oo la shaaciyey | Warbaahinta Ayaamaha
Qofkii ka dambeeyay dilkii Sheekh Cali Dheere oo la shaaciyey
MUQDISHO-AYAAMAHA-Maxkamadda Ciidamada Qalabka sida ee Soomaaliya ayaa Maanta oo Isniin ah shaacisay Magaca qofkii ka dambeeyay dilkii 17/5/2021 loogu geystay tuulada Xero-Jaale ee duleedka Magalada Gaalkacyo Sheekh Cali Axmed Faarax ( Sheekh Cali Dheere) oo ahaa Maamulaha Guud ee jamciyadda Imaam Nawawi ee gobolka Mudug.
Xeerilaaliye Ku xigeenka Maxkamadda Ciidanka Qalabka Sida Muumin Xuseen Cabdullaahi ayaa sheegay in guddi Saraakiil baarayaal ah oo ka socda Xeer ilaalinta maxkamadda & CID-da loo diray degaanka uu dilka ka dhacay , isla markaana cadeymaha dilka ay ka qoreen dad markhaatiyaal ah.
Sidoo kale waxaa uu sheegay in baaritaan kadib dilka Marxuum Sheekh Cali Axmed Faarax ( Sheekh Cali Dheere) uu ku cadaaday in uu ka dambeeyay Dable Cabdixakiin Cabdisalaan Aadan oo ka tirsan Saldhiga Booliska Gaalkacyo.
Waxaa sidoo kale uu sheegay Xeerilaaliye Ku xigeenka Maxkamadda Ciidanka Qalabka Sida Muumin Xuseen Cabdullaahi in dilka ay gacan ku siiyeen Askariga eedeysanayaasha kala ah, ina Saciid Cabdi Xidig & ina baalbaal, kuwaas oo dilka kadib u baxsaday dhanka degmada Galodogob ee Gobolka Mudug.
Ugu dambeyn Xeer ilaaliye Ku xigeenka Maxkamadda Ciidanka Qalabka Sida Muumin Xuseen Cabdullaahi ayaa sheegay in guddiga baarista Galdacwadeedkan ay soo saareen.
1: In Hay’adaha amniga Maamulada Puntland & Galmudug inay soo qabtaan eedeysanayaasha sare ku xisan, iyaga oo fulinaya Amarka Maxkamadda Ciidamada.
2: Hadii eedeysanayaasha aysan Maxkamadda hor-imaan ama aan la soo qaban muddo laba Bilood gudahood ah in Xafiiska Xeer ilaalinta Maxkamadda Ciidamada uu u gudbin doonaan Maxkamadda Ciidamada qalabka sida Galdacwadeedka eedeysanayasha, lana bilaabi doono dhageysiga kiiskooda lana xukumi doono, iyaga oo maqan.
3: In sidoo kale Guddiga ay u soo baxday in Saraakiisha Booliska ee qeybta Gobolka Mudug & Xafiiska la dagaalanka Argagaxisada ay sameeyeen waajib gudasho la’aan la xiriira dhacdadaan lagana qaadi doono tallaabo sharciga waafaqsan.